२ लाख ६८ हजारमै डर्ट बाइक, किन्ने होईन त ? – Agrimpost
मुख्य पृष्ठअटो अर्थ/बाणिज्य पत्रपत्रिका२ लाख ६८ हजारमै डर्ट बाइक, किन्ने होईन त ?
२ लाख ६८ हजारमै डर्ट बाइक, किन्ने होईन त ?
काठमाडौं । मोटरहेड कम्पनीको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेडले नेपाली बजारमा मोटरहेड ब्रान्डका विभिन्न बाइक बिक्री गर्दै आएको छ। केही वर्ष अगाडिदेखि नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको मोटरहेडले हाल, यो ब्रान्डका सात मोडल बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालमा बिक्री गर्दै आएका बाइक मध्ये ब्ल्यु/ब्ल्याक एमएच १५०लाई सबैभन्दा सस्तो मूल्यको डर्ट बाइकको रुपमा लिइन्छ । यो नेपालमा बिक्री हुने मध्यकै सबैभन्दा सस्तो मोटरसाइकल हो ।
१५० सीसी सेग्मेन्ट अन्तर्गत नेपाली बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा कम मूल्यको यो बाइक २ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा किन्न चाहनेले नोभेम्बर ११ मा दराजबाट किन्न सक्ने छन् । त्यसपछिको नियमित समयमा यसको मूल्य २ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो बाइक नेपालमा एक वर्ष अगाडि सार्वजनिक भएको हो ।
यस बाइकमा उपलब्ध जङसेन एयरकुल्ड इन्जिनले आकर्षक पावरट्रेन प्रदान गर्छ । इन्जिनमा पाँच स्पीड गियरबक्स लगाइएको छ भने, फ्रन्ट र रियरमा १७ इन्चको ह्वील दिइएको छ । यस बाइकमा हेडलाइट, एलइडी सिंग्नल लाइट, टेललाइट, स्टार्डड रियर भ्यु, प्लास्टिक सेलको विशेषता दिइएको छ । यसको फ्रन्ट साइडमा डिस्क ब्रेक र रियरमा ड्रम बेक लगाइएको छ ।
८ लिटर क्षमताको फ्युल ट्यांकी दिइएको बाइकमा युएसबी चार्जर सुविधासमेत उपलब्ध रहेको छ । बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स ३२० एमएम रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो बाइकले राम्रो बजार पाइरहेको छ । समय समयमा प्रदान गरिने स्किममा कारण बाइक किन्नेको संख्या बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ । यो बाइक किन्न चाहनेले ३० देखि ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेर अरु कर्जा सुविधामा किन्न सक्ने छन् ।